Antony 7 Tian'Andriamanitra Mivavaka Isika | TOKO VAVAKA
Home vavaka Antony 7 Tian'Andriamanitra Mivavaka Isika
Antony 7 Tian'Andriamanitra Mivavaka Isika
Enga anie 10, 2021
Androany dia hampianatra ny tenantsika amin'ny antony 7 tian'Andriamanitra hivavaka isika. Ny vavaka no fantsom-pifandraisana eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra isika, dia afaka mihaino azy miresaka amintsika amin'ny alàlan'ny vavaka ihany koa. Matetika anefa ny ankamaroan'ny mpino dia manjary mizatra amin'ny fahazarana mivavaka. Tena hitan'ny ankamaroan'ny mpino izany sarotra mivavaka raha ny hafa tsy manana fahaizana mamelona ny tenany amin'ny toeran'ny vavaka.
Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'ny 1 Tesaloniana 5:17 mivavaka tsy mitsahatra. Tian'Andriamanitra hivavaka tsy an-kijanona isika fa tsy ho reraka. Rehefa takatsika ny antony tian'Andriamanitra hivavaka dia hanamafy ny fiainam-bavaka ataontsika izany ary hahatonga antsika ho mpino tsara kokoa.
Maninona no tian'Andriamanitra hivavaka isika
Ho an'ny fiaraha-miasa aminy
Ny votoatin'ny fisiantsika na ny famoronana antsika rehetra dia ny fananantsika firaisana amin'ny Ray. Tian'Andriamanitra ny hanana fifandraisana maharitra amin'ny olombelona, ​​izany no antony namoronany ny olona tsy hitovy endrika amin'ny anjely na ny tenany fa ny tenany.
Andriamanitra dia mahita fitenenana amin'ny alàlan'ny olona, ​​mijery ny tenany amin'ny alalany Izy ary izany no antony tiany hanatonantsika azy hatrany. Tsarovy fa ao amin'ny bokin'ny Genesus rehefa namorona an'i Adama Andriamanitra, dia voasoratra ao amin'ny soratra masina fa hidina amin'ny takariva hariva Andriamanitra mba hiresaka amin'i Adama. Izany fiarahana izany no tadiavin'Andriamanitra ary izany no iray amin'ireo antony mahatonga antsika noforonin'Andriamanitra.
Tian'Andriamanitra handre azy mandrakariva isika
Ny fanahin 'Andriamanitra dia miteny foana. Na izany aza, mila ezaka am-pahatokisana amintsika mpino vao afaka mifanaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra. Rehefa mifanaraka amin'ny Andriamanitra amin'ny alàlan'ny vavaka isika dia hifandray amintsika mandrakariva amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina Andriamanitra.
Ny Fanahy Masina no mpampionona, toetra araka an 'Andriamanitra ao am-pon'ny olona. Mampianatra antsika sy mitarika antsika amin'ny zavatra ho avy izany. Tsy ho very amin'ny fitsaharan'ny fiainana isika raha mifandray amin'Andriamanitra mandrakariva. Andriamanitra dia maniry mpino taranaka iray izay azony ifandraisana amin'ny fotoana rehetra.
Andriamanitra dia te-hanao antsika ho fanjakan'ny mpisorona
Andriamanitra dia te-hanao antsika ho mpisorona araka ny lamin'i Melkizedeka. Ao amin'ny bokin'i Eksodosy 16: 6 Ary ho fanjaka-mpisorona sy ho firenena masina ho Ahy ianao. IRETO dia ny teny izay holazainao amin'ny Zanak'israely. Tamin'izany no nanirian'Andriamanitra hanafaka ny zanak Isreal tamin'ny fahababoana. Tian'Andriamanitra ho tonga fanjakan'ny mpisorona izy ireo. Ireo olona nanokana ny fiainany ho an'ny zavatr'Andriamanitra.
Toy izany koa, ny famonjena antsika sy ny fanavotana antsika amin'ny herin'ny ota amin'ny ràn'i Kristy dia ny hahatonga antsika ho tonga tahaka an'i Kristy. Jesosy Kristy dia Mpisorona. Ny Fisoronana Avo indrindra nanjaka teto an-tany dia i Kristy Jesosy. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra matetika isika dia mirona amin'ny fifonana ho an'ny olon-kafa na dia amin'ny vavaka ataontsika aza. Tonga firenena Pretra isika.
Mba hamindra ny anjelin'ny Tompo
Rehefa mivavaka tsy tapaka isika dia manelingelina an'Andriamanitra ny famindrana ireo anjely hanatrika ny toe-javatra misy antsika. Tsarovy ao amin'ny bokin'i Daniela raha nivavaka tamin'Andriamanitra zavatra iray manokana ny Mpaminany Daniel. Nandefa anjely Andriamanitra mba handeha hanome valiny an'ny vavak'i Daniela. Na izany aza, nitazona ilay anjely ny andrianan'ny Persia ary tsy nahazo ny valiny i Daniel.
Daniel 10: 13 Fa ny mpanapaka ny fanjakan'i Persia dia nanohitra ahy iraika amby roa-polo andro; ary, indro, Mikaela, lohan'ny mpanapaka, dia tonga nanampy ahy, satria izaho irery no sisa teo niaraka tamin'ny mpanjakan'ny Persia. Tsy nitsahatra nivavaka i Daniel mandra-pandefasan'Andriamanitra anjely iray hafa hanafaka ilay nitondra an'i Daniel dia nivavaka vavaka. Rehefa mivavaka tsy tapaka isika, dia voatohina Andriamanitra mba hampihetsika ny anjely hiasa ho antsika.
Ny vavaka dia miasa ho ampinga sy ampinga ho antsika amin'ny andro fahoriana
Antony iray hafa koa tian'Andriamanitra hivavaka tsy tapaka isika satria takatr'Andriamanitra fa manjary very ny fahafahantsika mivavaka tsara isika rehefa ao anaty olana isika. Na izany aza, ireo taona nivavahana taminao nandritra ny taona niainantsika dia hanomboka hiteny ho antsika amin'ny andro fahoriana.
Tonga ampinga sy ampinga miaro antsika amin'ny fotoan-tsarotra ny vavaka. Indraindray aza tsy takatsika akory ny fomba namonjy antsika tamin'ny olana izay namono ny ain'ny olon-kafa. Ny vavaka nandritra ny taona maro izay napetratsika tamin'ny lasa no mandeha amin'ny fiainantsika ankehitriny.
Andriamanitra dia te-hahatsiaro ny fanekeny tamintsika
Ho gaga ianao fa midika ve izany fa manadino ny fanekeny Andriamanitra amin'ny lehilahy indraindray? Eny, Andriamanitra tsy manadino ny fanekeny tamin'ny ain'ny olona. Na izany aza, matetika Andriamanitra dia maniry lehilahy hitalaho vonjy aminy.
Toy izany ny Isrealites. Nandritra ny taona maro dia nilomano tamin'ny fanandevozana andevo izy ireo ary toa tsy ho tonga ho azy ireo izany fanampiana izany. Ary Andriamanitra dia nanao fanekena tamin'ny razan'izy ireo, dia i Abrahama sy i Isaka ary i Jakôba. Mampalahelo fa, na teo aza izany fanekena izany, ny zanaky Isreal dia nijaly tamin'ny fatorana andevo tany amin'ny tany hafahafa.
Niantso vonjy tamin'Andriamanitra izy ireo mandra-pahatongan'ny andro. Eksodosy 6: 5 Ary efa reko koa ny fitarainan'ny Zanak'Isiraely, izay andevozin'ny Egyptiana, ka tsaroako ny fanekeko. Rehefa mitaraina amin'Andriamanitra isika amin'ny vavaka, dia mahatsiaro ny fanekeny tamintsika Andriamanitra ary mahatanteraka ny fanekena.
Andriamanitra dia te-hanafaka ny tany
Jenezy 1:26 Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny endritsika; ary avelao izy hanjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina, ny voro-manidina sy ny biby fiompy, ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny olona dia ny hanjakany amin'ny tany.
Na izany aza, very toerana ny olona rehefa niditra tao ny ota. Tsy afaka mandresy ny tany ny olombelona rehefa tsy mivavaka izy. Ny fakana fanahy avy amin'ny fahavalo no hahalavo azy indray. Fa rehefa mivavaka amin-kafanam-po izy dia ampian'Andriamanitra handresy ny fakam-panahin'ny fahavalo izy.
Tian'Andriamanitra mivavaka isika
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanimbana ny ozona malaza
Next lahatsoratraFomba 5 mety hitenenan'Andriamanitra aminao
Fomba dimy hivavahana amin'ny ady ara-panahy
Fiainana araka an'Andriamanitra
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny fitarihan'Andriamanitra mihoatra ny natoraly
Salamo 127 Ny dikan'ny hoe Andininy
Salamo100 midika hoe andininy tsirairay